सुन्दरी वर्षा राउतलाई लकडाउनमा कसले थुनिदियो कोठाभित्र ? – Gazabkonews
सुन्दरी वर्षा राउतलाई लकडाउनमा कसले थुनिदियो कोठाभित्र ?
सुन्दरी वर्षा राउतलाई लकडाउनमा कसले थुनिदियो कोठाभित्र ? यो दृश्य वर्षाको वास्तविक जीवनको नभई उनीद्धारा अभिनित पछिल्लो म्यूजिक भिडियोको हो । प्रमोद खरेलको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा वर्षाले प्रेम नपाउँदा उनलाई घर भित्र थु नि एको दृश्यलाई भिडियोमा देखाइउको छ । वास्तविक जीवनमा संजोग कोइरालकी पत्निका रुपमा जिन्दगी बिताइरहेकी यि सुन्दरी चलचित्र र म्यूजिक भिडियोमा सँगसँगै चर्चा कमाइरहेकी छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौ । नायीका पुजा शर्माले कहिल्यै आफुलाई पिताको अभाव नहुने बताएकी छन् । उनले जुन बेला आफुलाई पिताको सहयोग र सहारा चाहिएको थियो त्यो बेला नपाएको साथ अब नचाहिने बताएकी छन् ।वुवाले आमालाई तिरस्कार गरेका कारण आमासंग मात्रै बस्दै आएकी पुजाको संघर्षको जिवन छ । पुजालाई आमा एक्लैले हुर्काएकी हुन् । छोरी भएका कारण पुजा र उनको आमालाई परिवारले तिरस्कार गरेको उनले यस अघिका अन्तरवार्तामा बताएकी थिइन् ।
उनले आफुलाई जे काम गर्न पनि हिम्मत लाग्ने बताएकी छन् । त्यो साहस आफुलाई आमाले नै दिएको बताएकी छन् । आमानै आफ्नो जिवन भएकाले आफुलाई आमाले मात्र हेण्डल गर्न सक्ने बताएकी छन् । आमासंग टाढा हुन नपरोस भनेर नै आफुले विवाहका बारेमा अहिले सोच्न नसकेको बताएकी छन् ।उनले सकेसम्म धेरै समय आमासंगै बिताउन चाहेकै कारण विवाह पनि ढिलो गर्ने सोच बनाएको बताएकी छन् । कता कता डर लाग्छ विवाह गरेर जाने घर कस्तो पर्ने हो ? आमालाई हेर्न पाउँछु की पाउँदिन यो सबै कुरा सोचेर पनि विवाहको बारेमा सोच्न सक्दिन ।